बन्धक बनाएर ९ दिनसम्म करणी गरेको आरोपमा दुई पक्राउ !! | सुदुरपश्चिम खबर
बन्धक बनाएर ९ दिनसम्म करणी गरेको आरोपमा दुई पक्राउ !!
जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट हेर्ने उद्देश्यले उनीहरू गत चैत १ गते विद्यालय गएनन् । स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत १४ र १५ वर्षीया छात्रा परिवारलाई खबरै नगरी घरबाट निस्किएका थिए ।
सदरमुकाम पुग्नै लाग्दा दुवैलाई लिन मोटरसाइल आयो । उनीहरूलाई रुकुमकोट त पु¥याइयो तर सदरमुकाम घुम्ने, कमलदह अवलोकन गर्ने उनीहरूको योजना पूरा भएन । घुम्न निस्किएका उनीहरूलाई बन्धक बनाइयो । भूमे गाउँपालिकाबाट निस्किएका उनीहरूलाई लिन आधा बाटो पुगेका युवामाथि बन्धक बनाएको आरोप छ ।
दुवै बालिका सामान्य परिवारका हुन् । धेरै दिनसम्म छोरीहरू घर नफर्केपछि दुवैका आमा खोजतलास गरिदिनुप¥यो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका थिए । उनीहरू दुवैसित मोबाइल समेत छैन । सहजै कुरा गर्न पनि सक्दैनन् । कहिल्यै गाउँ नछाडेका उनीहरू आफैं अचम्ममा परेका छन् । के भइरहेको र के हुने हो भनेर आफूले केही थाहा नपाएको एक बालिकाकी आमाले बताइन् । छोरीहरू कता गए भनेर खोज्न आउँदा यो सबै देखिएको भन्दै उनीहरू अन्योलमा छन् । उनीहरूले प्रहरीकहाँ पनि छिमेकीको मोबाइल नम्बर टिपाएका छन् । आफूहरूसँग मोबाइल नभएका कारण त्यसो गर्नुपरेको उनीहरूले बताए ।